Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGerald
Indlu epholileyo yelizwe yokuhlala ngoxolo nokuphumla, ime imayile enye ukusuka kwidolophu yase-Akeaton kwicala lelizwe Isiseko esifanelekileyo sokukhenketha iLimerick, iKerry kunye neClare. I-Cottage yimizuzu eli-15 yokuqhuba ukusuka e-Adare, imizuzu engama-20 ukuya kwisixeko saseLimerick. Isikhululo seenqwelomoya saseShannon yimizuzu engama-40 xa uqhuba.
I-100 yeminyaka ubudala i-cottage yamatye ihlaziywe ngokupheleleyo kwi-2000. Igumbi elinye lokulala elinamagumbi amabini ane-ensuite ezantsi kunye negumbi elinye lokulala elineebhedi ezimbini eziphakamileyo. Ikwanayo negumbi lokuhlala elitofotofo elinekhitshi elikhulu elidityanisiweyo elinazo zonke izinto zangoku. Ikwanayo negumbi lelanga elijonge emazantsi eNtshona. Indawo yokulala ine-WiFi ebalaseleyo ekhoyo. Igadi yabucala ngasemva kwe cottage.
I-cottage ime kwindawo esecaleni yelizwe. Indlu yamatye elizwe enazo zonke izinto zangoku. Kukho indawo eninzi yasimahla yokupaka iimoto ecaleni kwe-cottage kunye ne-WiFi egqwesileyo ngaphakathi kwindlu
Nawuphi na umbuzo malunga nendlu yokuhlala unokuba ngefowuni, umbhalo okanye i-imeyile